Apple Music inosvika, Apple mimhanzi yekushambadzira sevhisi | Ndinobva mac
Patakapedza iyo Keynote, Tim Cook akasvika padanho ndokutumidza izvo zvaisatarisirwa, chimwe Chinhu chimwe… iyo Apple muvambi Steve Jobs akafarira zvakanyanya. Mune ino kesi, Apple yazivisa nhasi kuzvipira kwayo kune nyika yemimhanzi, iyo mimhanzi yekufambisa sevhisi yaakatumidza Apple Music.
Iyo mharidzo yeichi chitsva sevhisi yeBitten Apple Kambani yanga ichitungamira Jimmy Lovine Uye paakatanga chete, akavimbisa kuti sevhisi iyi ichave iri yekupedzisira mimhanzi sevhisi. Zvakawanda zvekuti ichave ichiwanikwa kunyangwe yeApple neWindows.
Apple Music ichaverengerwa mukati meMusic app. Izvo ndezve kubatanidzwazve kwemasevhisi akati wandei pasi pechikumbiro chimwe chete, zvichiita kuti vashandise nekukurumidza uye nyore. Imwe yezvinhu zvitsva izvo inounzwa ino mimhanzi yekufambisa sevhisi ndiyo 24/7 redhiyo yepasiresendiko kuti, uya ne redhiyo musi wa24 / 7, muchidimbu, a play play nemapoka. Ichagadziriswa ne Inorova Mumwe, a radio yenyika yakagadzirwa nevaartist vanobva kuNew York, Los Angeles neLondon vanozobatanidza madingindira zvakananga mu "mumhanzi wepombi"
Chimwe chiziviso chakaitwa nhasi ndechekuti ndezve iyo akanakisa chikuva chiripo nhasi kukwanisa kuisa mafeni mukubatana nevanyori. Kana Apple Music ikatanga kushanda tichakwanisa kutsvaga mukati meMusic application kwete mimhanzi yedu chete asi chero track inowanikwa muTunes catalog kusvika zvino.
Apple Music iwe uchadzidza kubva pane zvatinofarira uye zvichienderana nezvatakanzwa muzvikamu zvakapfuura, ichatipa play play akadanwa Zvako yakazara nenziyo.
Muchidimbu, sevhisi nyowani ichave ichiwanikwa kubva inotevera June 30. ari mitengo kuwana iyi sevhisi nyowani iri $ 9.99 pamwedzi uye $ 14.99 pane chirongwa chemhuri kana isu tine zvinopfuura zvikamu zvitanhatu mumhuri vanoda basa iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music inosvika, Apple mimhanzi yekushambadzira sevhisi
Runyorwa runyorwa rweMacs anotsigira iyo nyowani OS X 10.11 El Capitan